Olee otú mmekọrịta iPhone ka Car
1. mmekọrịta iPhone na iTunes
1.1 mmekọrịta Music
1.2 mmekọrịta Photo
1.3 mmekọrịta Video
1.4 mmekọrịta App
1.5 mmekọrịta Ndi ana-akpo
2. mmekọrịta iPhone ka Computer
2.1 mmekọrịta iPhone na PC
2.2 mmekọrịta iPhone na Mac
3. mmekọrịta iPhone na Akaụntụ
3.1 mmekọrịta iPhone na Google
3.2 mmekọrịta iPhone na Outlook
3.3 mmekọrịta iPhone na Facebook
3.4 mmekọrịta iPhone na Yahoo!
3.5 mmekọrịta iPhone na iCloud
3.6 mmekọrịta iPhone na Thunderbird
4. mmekọrịta iPhone na ngwaọrụ
4.1 mmekọrịta iPhone na Android
4.2 mmekọrịta iPhone na iPad
4.3 mmekọrịta iPhone na iPod
5. mmekọrịta iPhone ka Car
Apple CarPlay bụ ihe kasị mma iPhone ahụmahụ nke dị na ụgbọala ọhụrụ na na 2014, CarPIay bụ a echeta, odi mfe ụzọ iji gị iPhone n'ime ụgbọ ala.
Apple si isi ihe mgbaru ọsọ na-eke CarPlay bụ n'ụzọ zuru ezu iwekota ihe iOS ahụmahụ n'ime ụgbọala. N'ihi gịnị? Ị nwere ike nwere ohere ka ihe niile ị hụrụ n'anya banyere gị iPhone mgbe ụgbọala. A na-agụnye ozi ederede, ngwa, music, map, na ọtụtụ ndị ọzọ. Na, dum ihe-arụ ọrụ na Apple si Siri
Part 1. Gịnị Ihe ndị na-CarPlay-emere gị
Part 2. Olee iPhones Ịdị Nkwado CarPlay
Part 3. Olee ka mmekọrịta iPhone ka Car site Iji CarPlay
Part 4. Olee Cars Nkwado CarPlay
CarPaly-enyere gị aka ime ihe ị chọrọ mgbe ụgbọala ụgbọala.
1. The isi isiokwu n'azụ CarPlay bụ iji niile iPhone ọrụ enweghị na-emetụ gị iPhone mgbe ụgbọala.
2. Ị nwere ike ime ka oku, ga-esi ntụziaka, na-ege ntị music na ndị ọzọ. CarPlay ga-enye ọkwọ ụgbọala a maara iOS-dị ka interface, kama ịmanye ha ka ha na-amụta a dị iche iche UI oge ọ bụla ha ga-esi n'azụ wheel nke a ụgbọala ọhụrụ.
3. Ugbu a gị iPhone ike ụgbọala unu n'ebe obibi site na iji CarPlay. Apple Maps ngwa-abịa gị dashboard nke gị ụgbọala ma na-eduzi n'aka site n'aka ntụziaka, Nyochaa okporo ụzọ ọnọdụ, na-eme atụmatụ njem oge.
4. CarPlay nwekwara ike kọwaa gị ebe site na iji adreesị gị email, ozi ederede na Kalinda.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na a ụgbọala ga-dị mfe dị ka ịkwụnye gị eriri USB n'ime iPhone na ejikọta na nsọtụ ọzọ ka ụgbọala nke na USB n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Nzọụkwụ 2. Mgbe ala ụgbọ ala gị na-achọpụta rụọ na gị iPhone e ejikọrọ, CarPlay ga-akpaghị aka na-emeghe.
Nzọụkwụ 3. Ị nwere ike mgbe ahụ họrọ ka ịgbanwee n'etiti CarPlay na gị ụgbọala si ala infotainment interface site na-ahọpụta kwesịrị ekwesị ngosi site na CarPlay menu.
Olee otú e Siri ike?
Apple si mebere nnyemaaka a na-agba ọtụtụ ugboro n'ime CarPlay. Ị nwere ike ịnweta Siri site na ịpị ụgbọala olu-control bọtịnụ. Ị nwere ike ịjụ Siri na-egwu music si ọkacha mmasị gị artists, na-emeghe CarPlay ngwa, ebe ekwentị oku, na-eziga ma zaghachi ozi na-ele anya ruo ntụziaka. Ihe mgbaru ọsọ bụ na-ebelata ego nke oge ị ga-eji na-achọ na ala ụgbọ ala gị si na-akụtu ngosi.
CarPlay na-tụọ on nhọrọ 2014 ụgbọala-Vehicle Model si Ferrari, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz na Volvo. Ọzọ automakers mere na-enye CarPlay nkwado na-eme n'ọdịnihu ụdị, Dị ka BMW, Chevrolet, Ford, Jaguar, Kia, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA Peugeot Citroen, Subaru, Suzuki na Toyota.
Ụfọdụ automakers nwekwara ike na-enye Aftermarket ngwa na-eme ka ụgbọala CarPlay dakọtara. Nnọọ, Mercedes-Benz bụ nanị emeputa na-egosi na ọ na-arụ ọrụ na-eweta CarPlay ka okenye ugbo ala site na njedebe nke afọ.
Nyefee Data si iPhone ka PC
Best iPhone Nyefee Ngwá Ọrụ maka Ị
1 Pịa Gbanwee si iPhone ka Android
1 Pịa Nyefee si gam akporo ka iPhone
Top 17 ngwa ọdịnala na iPhone
1 Pịa Detuo Blackberry ka iPhone
1 Pịa Nyefee Samsung ka iPhone
1 Pịa Bugharịa iPhone ka Samsung
1 Pịa Detuo Nokia ka iPhone
A Full Guide iji Hichapụ Everythong on iPhone
4 Ụzọ ndabere iPhone Ndi ana-akpo na / enweghị iTunes
3 Ụzọ Ime iPhone SMS ndabere
Top 10 égwu Iji mee ka gị iPhone More Secure
Iphone Setting Nsogbu mkpa ka ị mara otú ndozi
10 Common iPhone Software Nsogbu
Common iPhone Music Nsogbu na Solutions
iPhone Digitizer: Ọ Dị Gị Mkpa Dochie Ọ?
Top 10 Alternatives ka TiVo App maka iPad na iPhone
Ebe na otú na-ere Old iPhone maka a Mma Ahịa
> Resource> iPhone> Olee ka mmekọrịta iPhone ka Car